Fiaraha-miasan’ny CUA –UE: hatao “pavé” hanamboaran-dalana ny fako plasitika | NewsMada
Fiaraha-miasan’ny CUA –UE: hatao “pavé” hanamboaran-dalana ny fako plasitika
Manampy ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) ny Vondrona eoropeanina (UE) sy ny Fikambanana Let’s do it Madagascar amin’ny fiarahana manadio ny renirano. Hanampy amin’ny asa ny Mr Bricolage sy ny Kopakelatra Star. Fantatra mantsy fa antapitrisa taonina isan-taona ny fako mivarina an-dranomasina, indrindra ny plastika mamono ny zavaboahary. Nanomboka volana jona ary mitohy hatramin’ny faran’ny volana novambra izao, ny “UE BeachCleanup”, hetsika maneran-tany any amin’ny firenena misy fari-dranomasina na tsia.
Ny “UE BeachCleanup” dia fanentanana indrindra manerana izao tontolo izao ho fiarovana ny ranomasina sy ny zavaboahary ao aminy. Mila fiarahana ny fanatanterahana izany, araka ny tapaka teo anivon’ny Firenena mikambana tamin’ny oktobra oktobra 2021. Koa manokana fotoana iray ho fanadiovana ny reniranon’Ikopa ny UE eto Madagasikara sy ny Let’s do it Madagascar ary ny CUA. Afaka tonga eny an-toerana izay te handray anjara, ny asabotsy 27 novambra 2021 amin’ny 8 ora 30. Rariny raha diovina Ikopa fa ny fako avy ao ihany no mivarina any an-dranomasina farany.
“Efa manao ezaka ny kaominina fa isika ihany no mandoto tanàna”, hoy ny ben’ny Tanàna, Andriantsitohaina Naina. Hisy tetikasa hiadiana amin’ny plastika manokana. Ireo vehivavy marefo no asaina manangona azy ireny ary vidina aminy ny karazana fako plastika rehetra, ahodina avadika “pavés-autobloquants”. Ireny indray avy eo hanamboaran-dalana any anaty tanàna. Anisan’ny tetikasa iray nambaran’ny ben’ny Tanàna koa ny fanivanana fako sy famadihana azy ho gazy, azo amidy rehefa mety ny andrana.
Miainga amin’ny tsirairay ny fahadiovan’ny tanàna. 40-45 % amin’izao fotoana ny fivangongoan’ny fako eto an-dRenivohitra. Mbola miezaka ny CUA hanampy olona sy fitaovana.